Tena ilay "Fahendrem-bahoaka" ve? | Martech Zone
Tena ilay "Fahendren'ny vahoaka" tokoa ve?
Alahady, Martsa 18, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Ny "Fahenan'ny olona" dia toa io teny majika an'ny Web 2.0 sy Source io. Raha Google ny teny dia misy 1.2 tapitrisa eo ny valiny, ao anatin'izany Wikipedia, indray mipy, Mavericks any am-piasana, Starfish sy ny Spider, Wikinomics, Etc.
Fahendren'ny vahoaka tokoa ve izany?
RNH, Tsy mino aho. Mino aho fa lalao statistika sy probabilité kokoa io. Nanolotra fitaovana iray hifandraisana amin'ny fomba mahomby amin'ny Internet ny Internet amin'ny alàlan'ny mailaka, motera fikarohana, bilaogy, wiki ary tetikasa loharano misokatra. Amin'ny famoahana ny teny amin'ny olona an-tapitrisany dia tsy tena mampiditra ny fahendren'ny olona an-tapitrisany ianao. Mitondra fotsiny ny fampahalalana amin'ny olon-kendry sasany amin'izany tapitrisa izany ianao.
Raha 1 amin'ny 1 tapitrisa ny tombony azoko amin'ny loteria 6.5 tapitrisa $, dia afaka nividy tapakila 6.5 tapitrisa aho tsirairay avy ary nandresy. Na izany aza, tamin'ny tapakila 1 ihany no nandreseko! Tsy fahendrena ny mividy ny tapakila 6.5 ​​tapitrisa… izay moana tahaka ny nahavery 5.5 tapitrisa dolara tamin'ny fifanarahana, sa tsy izany? Ny famoahana ny fampahalalana amin'ny Internet dia tsy mitaky vola an-tapitrisany maro - na izany aza maimaim-poana indraindray na amin'ny karama vitsivitsy.
Hitako fa mitovy ny hevitra ao amin'ny bilaogiko… manampy hevitra mahafinaritra amin'ilay lahatsoratra izy ireo. Tena tiako ny fanehoan-kevitra - manetsika ny fifanakalozan-kevitra izy ireo ary manome na mpanohana na fanoherana ilay hevitra tiako hambara. Na izany aza, isaky ny olona 100 mamaky ny bilaogiko dia 1 na 2 fotsiny no tena manoratra hevitra. Tsy midika akory izany fa tsy mamiratra ireo mpamaky hafa (rehefa dinihina tokoa, mamaky ny bilaogiko izy ireo?;)). Midika fotsiny izany fa ny Fahenan'ny vahoaka raha ny momba ny atiny dia noho ny mpamaky vitsivitsy ihany.
Sa ny Fahendrena hanatrarana vahoaka?
Amin'ny alàlan'ny fanatrarana bebe kokoa, azoko atao anefa ny misambotra ireo mpamaky vitsivitsy ireo. Angamba tsy ilay Fahenan'ny vahoaka, tena izy ilay Fahendrena hanatrarana vahoaka.
Io ve no Faran'ny Hillary Clinton?
Mar 18, 2007 ao amin'ny 9: PM PM
Angamba izy io dia toy ny lavanty, izay entin'ny tolo-kevitra mifandimby ny vidiny farany. Amin'ity tranga ity dia entin'ny mpandinika misimisy kokoa ny sangan'ny faharanitan-tsaina - "Toy ny vy maranitra ny vy, dia toy izany ny olona iray manaranitra ny fahendren'ny sasany. (Ohab. 27:17)
Mar 18, 2007 ao amin'ny 10: PM PM
Zoro mahavariana amin'ity izay tsy noeritreretiko. Tiako koa ny andinin-teny ohabolana. Misaotra, Christine!
Mar 19, 2007 ao amin'ny 12: PM PM
"Ianao ve dia mitondra ny fampahalalana fotsiny amin'ny olon-kendry sasany amin'izany tapitrisa izany"
Mifanohitra amin'izay kosa, ny ambiny misafidy fahamarinana antsasaky ny marina ary eo ambany ny lainga, ary avy eo mamerina ny vaovao amin'ny hafa. Afaka misaotra ny bilaogy sy ny forum isika amin'izany 😉
Mar 19, 2007 ao amin'ny 6: PM PM
Etsy ankilany, taorian'ny nandaozako ny tranokalanao, dia nitsidika bilaogy iray momba ny hevitry ny gazety teo an-toerana sy bilaogy iray hafa aho. Tsy dia variana amin'ny sasany amin'ireo adihevitra momba ny olana ara-politika aho. Holazaiko fa matetika mandeha amin'ny làlana hafa izy ireo.